भ्याटम्यान भनेको के हो? | RayHaber
घररेलभट्टमान के हो?
16 / 11 / 2019 रेल, साधारण, KENTİÇİ रेल प्रणाली, टर्की, ट्राम
वाटमान भनेको के हो, यसले के गर्छ, कसरी गर्ने? : शहरी यात्रु यातायातमा प्रयोग हुने यात्री गाडीहरू, विशेष रेलहरूमा हिड्ने सडकमा नराख्ने र विद्युत् शक्तिसँग सञ्चालन गर्ने ट्राम भनिन्छ। यी वाहनहरू प्रयोग गर्ने मानिसहरू, अर्थात् ट्राम, भनिन्छ vatman। देशभक्तिमा ट्राम / सबवे चालकको रूपमा चिनिन्छ देशभेद; यो रेल प्रणाली टेक्नोलजीजका घटनाहरु र यातायात वाहनों को महत्व को रूप मा शहरी यातायात मा ट्राम / मेट्रो जस्तै एक महान आवश्यकता हो।
तिनीहरू सामान्यतया मार्गहरूमा काम गर्छन् जुन धेरै फरक हुँदैनन्। उनीहरूलाई समर्पित विभागमा काम गर्दछ। सेवाको निरन्तरता र कार्य प्रणालीको लागी कार्यरत घण्टा लागु लचीलोपन देखाइन्छ। के नागरिकहरू के गर्छन्?
नागरिकहरूको कर्तव्य उनीहरूको शक्ति र जिम्मेवारी के हो?
ट्राम / मेट्रो ड्राइभ (motorman), अनुसार व्यापार को सञ्चालनको सामान्य सिद्धान्त मा, वाहन, आपूर्ति र कुशलतापूर्वक उपकरण, कामदार स्वास्थ्य, काम सुरक्षा र पर्यावरण संरक्षण नियमहरु र आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र गुणस्तर आवश्यकताहरु अनुसार प्रयोग:
सडकमा ट्राम / मेट्रो लिनु अघि आवश्यक जाँच गर्न,
वाहनको गति समायोजन गरेर र स्टपमा बिताएका समय समायोजन गरेर ट्राम / मेट्रो प्रयोग गर्दै,
यात्रा को समयमा, निरन्तर मार्ग को निरीक्षण र लाइन मा चेतावनी र संकेत को पालन गर्नुहोस,
मार्गमा पैदल यात्री र सडक वाहनों मा ध्यान दिन को लागी,
दुर्घटना र दुर्घटनाको अवस्थामा आवश्यक हस्तक्षेप गर्न, दुर्घटना रिपोर्ट सुरक्षा र गति प्राधिकरण द्वारा राखिएको छ,
निर्देशनहरू पूरा गर्न र आवश्यक उपायहरू लिनुहोस्,
ट्राम / मेट्रो को रखरखाव कार्ड राखदै,
आवश्यक हुँदा यात्रुहरूलाई निर्देशन र निर्देशन दिँदै,
यात्रुहरूको चाहना र उजुरीको वरिष्ठहरुलाई सूचित गर्न।
कर्तव्य र प्रक्रियाहरूसँग अनुपालन सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा नियमहरू पालन गर्न।
भट्टमान कसरी छ?
पहिलो, भौतिक र सुनुवाइ अंग, जिम्मेवार, रोगी प्रयोग गर्न एक motorman, खुट्टा र हात आँखा समन्वय रूपमा काम गर्न चाहने ती मानसिक, हुनुपर्छ चिसो-blooded व्यक्ति को मामला मा कुनै पनि बाधा को अभाव। vatmanlık मान्छे बढि तनावमुक्त तरिका आफ्नो पेशा अभ्यास गर्न सक्षम छन् यो सुविधा। वाट यो वित्त अलग्गै;
एक उच्च विद्यालय वा समकक्ष विद्यालयको स्नातक हुन
आफ्नो सैन्य सेवा गर्न
35 भन्दा पुरानो होइन
त्यहाँ कुनै शारीरिक र मानसिक असक्षम हुनु हुँदैन।
तिनीहरू नगरपालिकाहरूमा कार्यरत छन्। नगरपालिकाहरूले नागरिकता चाहिन्छ जब यो नागरिकता चाहिन्छ। नगरपालिकाको पाठ्यक्रममा, 23 लाई आवश्यक सैद्धांतिक र व्यावहारिक पाठ्यक्रमहरू र पाठ्यक्रम प्रक्रियाको लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिइएको छ। एक लिखित र मौखिक साक्षात्कार उन उम्मेदवारहरूलाई दिइएको छ जसले सफलतापूर्वक कोर्स पूरा गरेको छ, र त्यसपछि यो भाग जुन सफलतापूर्वक यो खण्ड पारित हुन्छ उनीहरूको कर्तव्यहरू नागरिकको रूपमा सुरु गर्न सक्छन्।
जो देशभेदको पेशामा सफल छन् त्यसो त प्रशिक्षक, आंदोलनका प्रमुख, अपरेशनका प्रमुख वा ट्राफिक पर्यवेक्षकमा जान सकिन्छ।
क्याटेनरी वर्कर भनेको के हो? तलब ...
इज्मिरिम कार्ड भनेको के हो, कसरी किन्ने, लोड गर्ने र…
एन्टिफले राहा बनाएको छ!
मंत्री Arslan, TÜLOMSAŞ YHT बनाइनेछ
एस्कीहिर नयाँमा भ्याटम्यान उम्मेद्वारहरूलाई प्रशिक्षण।
राष्ट्रपति Altay, भियतनाम सीट पारित गरेको छ
Akakaray रेखा सीट बाट हेर्नुहोस्
Samsun रसद केन्द्रमा सबैभन्दा ताजा अवस्था के हो?
सिल्क रोड परियोजना के हो?
डिंगोको अस्तबलको अभिव्यक्ति जुन हाम्रो भाषामा रोजवुड बनेको छ…
कसम हुन सक्छ
भट्टमानको अर्थ के हो?
भट्टमान को हो
Vatman के हो?
वाटम वेतन कितना छ
वाटमानले के गर्छ?
जीवनको अवस्था के हो
आमा हुनु के हो?
राष्ट्रियता प्रमाणपत्रको एक प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्ने
नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू के हो?
आज इतिहासमा: 13 दिसंबर 1939 रेलवे एर्जुरम